Etazonia: Mpianatra vavy mitia vehivavy iray nalefa tamina “alim-pandihizana fitaka” tany Mississipi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2010 5:55 GMT
LOL cat zarain'ny blaogy miaro ny zon'ireo vehivavy
Tovovavy 18 taona avy ao Mississippi i Constance McMillen izay, tahaka ireo tanora amerikanina maro, naniry ny mba hanatrika ny alim-pandihizan'ny andiany misy azy tao ampianarany tamin’ity taona ity. McMillen, ilay lesbian [vehivavy mitia vehivavy], dia nanao fotoana ny hanatrika ny alim-pandihizana miaraka amin’ny vehivavy sakaizany ary hanao fitafy tuxedo. Ny sekoly fianarany anefa, teo anatrehan’izany, dia nanapan-kevitra ny tsy hampiditra azy roa.
Niantso ny Fikambanana Miaro ny fahalalahan'ny Sivily Amerikana – American Civil Liberties Union (ACLU) i McMillen, izay nandefa taratasy fangatahana tany amin’ny sekoly fianarany . Naleon'ny sekoly nanafoana ilay alim-pandihizana saika hatao ny 2 Aprily, toy izay hanaiky ny fangatahan'ny ACLU, namoahana ilay fanambaràna nataony ny 10 martsa manao hoe : “Vokatry ny fikorontanana misy amin’ny zava-mitranga ankehitriny momba ny fandaharam-potoana ato ampianarana, ny Akademian'ny Itawamba County dia nanapa-kevitra ny hanafoana ilay alim-pandihizana saika hatao ato amin’ny Anjerimanontolo momba ny fambolena eto Itawamba amin’ity taona ity.
Nanoratra momba izay efa niainany izany alim-pandihizana izany i Navy Wife, vzehivavy iray manambady vehivavy, ary nampifandraisiny amin’ny fahalalàny amin'ny maha vady miafin'ny vehivavy iray mpanamory sambo Amerikana azy:
Raha ny mahazatra, tokony ho hatezerana no asetriko ny mpandraharaha ao amin'ny sekoliny, dia toa fanantenana ihany kosa no tsapako. Mitondra fanantenana ho an’ity firenena adaladala ity, izay misakana anay tsy hivady ara-dalàna, ho afaka hanompo malalaka anatin'ny tafika, mba ho afaka hifampizara ny tombontsoa amin’ny vadinay, mba ho afaka hanangana zanaka i Constance. Constance, mbola tena ao anaty fahatanorana tokoa, dia nisafidy ny maha-izy azy tsy misy tahotra ny lalàna. Nanome fanantenana ho ahy izy fa amin’ny hoavy izay tsy ho ela akory, afaka hiaina amina tontolo izay ahafahan’ny olon-drehetra mitondra izay olona tiany mandritra ny alim-pandihizana sy hitafy izay tianay hitafiana izahay.
Mino aho fa ho afaka hijoro toa azy koa. Ankehitriny aloha, hitsiky aho amin'ny fisian'ity tovovavy tanora ity, izay hanova ny tontolo ho antsika rehetra. Ary hatatatatako mafy ny iPod-ko sy ny mozika rock, hodidinin’ireo miaramila izay mahita fa tsy hafa akory fa vadina Navy hafa indray ity.
Miaraka amin'ny fanampian’ny ACLU, nitondra ny raharaha teny amin’ny fitsarana i McMillen. Ny 23 Martsa, ny mpitsara iray tao Mississipi dia namaritra fa nohitsahan'ny sekoly ny zon’i McMillen, saingy tsy ho afaka hanery ny sekoly hamerina indray ilay alim-pandihizana izy.
Rehefa nofoanana ny alim-pandihizanan'ny sekoly, dia nanome hevitra ny hanaovana alim-pandihizana iray hafa hanoloana izany ny vondron'olona iray sy ireo raiamandreny amin'ny Aprily. McMillen kosa anefa, nomena adiresy diso ka lasa tany amina alim-pandihizana diso izay mpianatra vitsy monja no nanatrika tao. Ny ambin'ny fianarana kosa dia nanatrika ilay tena alim-pandihizana.
Mpitoraka blaogy marobe no nanaiky ny fanilihana an’i McMillen, raha naneho ny fankatoavan'izy ireo ny zony kosa ny maro hafa. Nanambara i Joe. My. God., mpitoraka blaogy nahazo ny loka LGBT, izay anisan'ireo mpitoraka blaogy voalohany nizara ny vaovao mikasika ity alim-pandihizana diso ity, ary milaza:
Nanamafy i Constance McMillen fa nisy alim-pandihizana nihaja niafina tany amin'ny toeran-kafa tao an-tanana, raha nanatrika ny alim-pandihizana noheverin'izy sy ireo mpianatra manokana ho alim-pandihizana ofisialy izy ireo.
Nizara taratasy misokatra ho an’ny raiamandreny sy ireo mpandraharaha izay namitaka an’i McMillen, i Marriage Tales, mpitoraka blaogy nilaza fa tsy dia miady hevitra loatra mikasika ny politika:
Mino aho fa indray andro any ho tonga saina ianao fa ny fiheveranao ho manaraka ny norma, ny firesahanao ny ratsy sy ny fankahalana ny zava-misy nataonao, dia fitsangananao hanohana olona iray sy hitondra fiovana ary meteza ho ny fiovàna. Ho solon'izay, hihalehibe ianao ary mety indray andro hiteny amin’ny zanakao hoe eny, namonjy alim-pandihizana toy ny fanaon’ny sekoly ambony rehetra ianao ary mety hahatsiaro na tsia izay akanjo nentinao na izay nataonao na niaraka tamin’iza ianao ary dia toa tsy zava-miavaka izany. Kanefa mety ho nihalehibe ianao ary nilaza tamin’ireo zanakao fa niady ho an’olona iray ianareo, olona iray nanana fahasahiana nijoro tamin'ny maha-izy azy, na dia olona hafa noho ny rehetra aza izy, ary niady ho fiarovana ny zony. Mety ho ianao io olona io, ampianaro ny zanakao io lesom-piainana io, mba tsy ho olona mpandainga, mifanjevo amin’ny vahoaka ary manohitra ny hiady ho an’olona iray. Arahabaina ianao.
Milaza an’i McMillen ho mahery fo i Pam's House Blend, mpitoraka blaogy iray hafa anisan'ny nahazo fankasitrahana tamin’ny tontolon’ny blaogy LGBT, saingy nanontany tena raha tsy tsra ho azy ny mandao ny tanàna keliny, sady manasa ireo mpamaky azy izy haneho ny heviny.
Lafiny iray hafa mifandraika amin’io raharaha io ihany, nizara ny sarin’ireo mpandray anjara tamin’ny alim-pandihizana natao ho an'ireo ‘herevina ho norma’ tao amin’ny Facebook sy Flickr ilay mpitoraka blaogy.
Ny 24 Martsa, ny blaogy Feministing ( miaro ny zon'ireo vehivavy ) dia nametraka rohy mankamin'ny lahatsoratry ny CNN mitatitra fa manampy an'i McMillen amin'ny fahazoany vatsim-pianarana avy amin’ny kaompania misahana ny fampahalalam-baovao, Tonic.com, ilay vehivavy mitia vehivavy (lesbienne) mpiteny amin’ny fahitalavitra, Ellen DeGeneres. Ny mpanoratra ny Feministing (Ny fahanginana dia famadihana ) dia nanontany tena hoe nahoana ireo olona marobe ireo no nanao tetika hanoherana an'i McMillen:
Tsy misy olona afaka nisakana izany ve ? Tsy misy olona avy amin’ireo mpianatra ve afaka nilaza tamin'i McMillen sy ireo mpianatra dimy hafa ve hoe aiza no misy ilay alim-pandihizana tena izy ? Ary tsy nisy olona avy tamin’ireo komitin’ny fikarakarana ve nametra-panontaniana fa mampijaly izany ?
Toy ny ohatra iray mikasika ny fandraisana fanapahan-kevitra adaladalan'i Mississippi io tanàna io : fiverenan-dalana, fanosoram-potaka ary fankahalana. Mino aho fa handray ny vatsim-pianarany i McMillen ary handeha hamonjy ny sekoly misy ny sokajy rehetra sy tsara fandray. Mendrika loatra izany izy.
Raiso ny fepetra: ny Human Rights Campaign [fanentanana ho fiarovana ny zon'olombelona] dia nametraka fanangonan-tsonia ho fanasaziana ny sekoly. Soniavo eto.
Ny fikambanana ao amin'ny Facebook antsoina hoe “Constance quit yer cryin” dia natsangana ho fanohanana sy hifampizaram-baovao mikasika ny zava-mitranga amin’i McMillen. Mpikambana iray ao amin'ny vondrona no nizara vaovao nitondra fanantenana : Voafidy ho isan’ny mpitarika ny fampirantiana ny NYC Pride Parade ny 27 Jona 2010 i Constance. Voalazan’io lahatsoratra io ihany, voaasa koa izy hanatrika alim-pandihizana natokana ho an’ny vehivavy mitia vehivavy any San Francisco atsy aoriana kely amin’ity taona ity.